Australia Dollar - Wikipedia
Australian dollar (Af-Ingiriisi)
Website [http://www.rba.gov.au www.rba.gov.au]
Template:Country data Christmas Island
Template:Country data Cocos (Keeling) Islands
Template:Country data Kiribati (alongside Kiribati dollar)
Template:Country data Papua New Guinea (alongside Papua New Guinean kina)
Template:Country data Tonga (alongside Tongan pa'anga)
Template:Country data Tuvalu (alongside Tuvaluan dollar)
Template:Country data Vanuatu (alongside Vanuatu vatu)
Template:Country data New Caledonia (France)
Ilaha warbixinta Reserve Bank of Australia, March 2016.
Toos loo. adeegsado $5, $10, $20, $50,
Website [http://www.noteprinting.com www.noteprinting.com]
Website [http://www.ramint.gov.au www.ramint.gov.au]
Dakhliga Australia (calaamad: $; code: AUD) waa lacagta Commonwealth of Australia, oo ay ku jirto dhulalka dibadda ee Jasiiradda Kirismiska, Cocos (Islands of Islands), iyo Norfolk Island, iyo sidoo kale jasiiradaha madaxa banaan ee Pacific Island ee Kiribati, Nauru , Papua New Guinea, Tonga, Tuvalu, iyo Vanuatu. Australiya gudaheeda, waxaa had iyo jeer loo soo gaabiyaa calaamadda doolarka ($), iyadoo A $ ama AU $ mararka qaarkood loo isticmaalo in lagu kala sooco lacagaha kale ee doolarka doolarka ah. Waxaa loo qaybiyaa 100 senti.
Sannadkii 2016, dollarka Australia wuxuu ahaa lacagta shanaad ee ugu caamsan adduunka, taasoo ka dhigan 6.9% saamiga maalinlaha adduunka (hoos uga soo dhacay 8.6% 2013). Waa suuqyada adduunka ee suuqyada sarrifka lacagaha sarrifka ah ee ka dambeeya doolarka doolarka Mareykanka, euro, yen iyo pound sterling. Doolarka Australiya wuxuu caan ku yahay ganacsatada lacagta ah, sababtoo ah heerka dulsaarka sarreeya ee Australia, xoriyada u dhaxaysa suuqa sarrifka lacagaha qalaad ee ka dhexgalka dowladaha, xasiloonida guud ee dhaqaalaha Australia iyo nidaamka siyaasadeed, iyo aragtida dheeraadka ah ee dakhliga Australia faa'iidooyinka kala-duwanaanta ee taxane ah oo ay ku jirto lacagaha adduunka ugu weyn, gaar ahaan sababtoo ah soo-saarka ugu weyn ee dhaqaalaha Asiyaasha iyo wareegga badeecada. Lacagta waxaa inta badan lagu magacaabaa ganacsatada sarrifka ajnabiga ah sida "Aussie dollar".
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Australia_Dollar&oldid=221713"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 Oktoobar 2021, marka ee eheed 06:10.